Inhloko ZeNdaba Mabasa 21, 2021
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba izolo iCovid 19 ibulele umuntu oyedwa, okukhuphule inani lasekhulelwe yilumkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye-1,554.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke ezivikela ukuthelelwa iCovid 19 lanxa inani lababanjwa belegcikwane leli selisehla kodwa kukhuphuka inani lasebehlatshwa ijekiseni yokuzivikela eleVaccine.
Kulokufuthelana okukhulu kulandela ukupasiswa kwenguquko yesibili kusisekelo sombuso welizwe, iConstitutional Ammendment Bill No. 2 yiphalamende izolo lapho amalunga ebandla leMDC-T abambane khona laweZanu PF ekupasiseni linguquko. Ibandla leMDC Alliance lalile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla amanengi kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleSouth Africa sezethule ukukhathazeka ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni, olweCovid-19 Vaccination, oluqhubeka lumisiwe kungakhathalekile lombiko othi icoranavirus izahlasela ngamandla okwesithathu ebusika.
EleBotswana lithi liyenze ngokusemthethweni ngesikhathi libuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe ekade zingabhalisanga ukuthi zifuna ukuphindela ekhaya. Inhlanganiso yeziphepheli eye UNHCR kade ichothoze inyathela leli, kodwa uhulumende weBotswana uthi konke kuyenziwe kulandelwa umthetho, okugoqela ukukhulumisana layo inhlanganiso le, kanye lohulumende weZimbabwe.